Isexwayiso! Yini okudingeka ukwazi mayelana 3 izinhlobo ezahlukene yokuhlanza services, ngaphambi ukhetha omunye! Umehluko akunandaba kuphela, kodwa kungasindisa isikhathi nemali ngesaziso the ukuhlukanisa.
Kubalulekile ukuba azizwe kangcono Ukukhetha kwakho ilungelo Atlanta yokuhlanza amasevisi, futhi ukukusiza wenze lesi sinqumo, udinga ukwazi mayelana 3 izinhlobo ezahlukene yokuhlanza imisebenzi ekhona. Atlanta Cleaning Ochwepheshe a Uhlobo 3 Full ngokuqinile Service lonakekela ukuthi ine phezu 2 Eminyakeni nakho. Kukhona isizathu sokuthi ethu Atlanta yokuhlanza amasevisi zona azishintshwa isikhathi kanye nokuncintisana.
3 Izinhlobo Ezihlukahlukene Cleaning Services & Amanani
Izinhlobo ezihlukene izinqubo. Ibhayisikobho ukuqasha, ukuqeqeshwa, futhi kweso, kukhona izenzakalo ezivelele yini eyenza yokuhlanza izinkampani ezahlukene.
UHLOBO 1 Ukuhlanza SERVICE:
Lezi zinhlobo Atlanta yokuhlanza services, the Small, Umama Local & Pop noma Husband & Wife Cleaning Team, abe izinzuzo ambalwa. Le sevisi hlobo angakunika ukunakwa okuhle ubuwena, kodwa ngokuvamile has little back-up uma umuntu egula noma cha-imibukiso, ukuze ungase ube more aphuthelwe ukuhlanzwa izinsuku.
Ngesikhathi esebenza a close, amancane, ibhizinisi lomndeni ezinjengalezi, ungathola ubuhlobo obuhle, kodwa umehluko ubuntu emalungwini omkhaya ezingavela. Atlanta yokuhlanza services ezinjengalezi futhi singase sithwale amanani aphansi umshuwalense. Imisebenzi Small kanje ngokuvamile bantula inkonzo yesikhathi amakhono lonakekela, futhi wokuhlola kanye kweso babengase entula.
Iningi yokuhlanza amasevisi evamile gcwalisa-video skwele indawo yakho noma ekhaya.
Nasi intengo isampula ngamunye footage square:
.20 ukuze .50 per footage square(kuye ngezinga lobunzima)
UHLOBO 2 Ukuhlanza SERVICE:
The Large Franchise National. Lolu hlobo ukusebenza ngokuvamile unemisebenzi yomuntu-amandla abasebenzi akhawunti, kodwa kuphela-isitayela esisodwa-kuvumelana yonke umsiki cookie “franchise” formula. Lesi sici esingavamile futhi esiwuphawu njengoba kuqhathaniswa ezincane Atlanta yokuhlanza amasevisi. The emikhulu franchisor National, kuyinto endlale uhlobo operation futhi enganciphisa the uqobo “wendawo” ukunakwa, eguquguqukayo, futhi egcizelele yokuhlanza ibhizinisi lakho noma ekhaya kungase kudingeke. Franchisors ngokuvamile babe inkonzo yesikhathi lonakekela amakhono, kodwa amazinga service kungenzeka kungahambisani imizi ngemizi. Ngesikhathi, kukhona franchisee inzuzo akhawunti, kanye “re-ukudayisa” of yakho Atlanta yokuhlanza amasevisi inkontileka ezinye franchisees zingabangela inzuzo ezingenasidingo akhawunti, futhi kubangele izinkinga zangempela yokuhlanza service.
UHLOBO 3 Ukuhlanza SERVICE:
The ezinkulu, Ekhaya Ngokusekelwe Okugcwele Service lonakekela Firm. Atlanta Cleaning Ochwepheshe iwela kulesi sigaba Atlanta yokuhlanza services, futhi unikeza inhlanganisela best of amandla Large inkampani nenkampani encane ukunakwa siqu; Atlanta Cleaning Ochwepheshe bakulesi okusekelwe futhi ubelokhu ekhonza Atlanta futhi emizini ezingelezele obuleweyo, futhi uthola ukuzinza elikhudlwana, esungulwe yokuhlanza inkampani inala yomuntu-amandla ukuthi anganikeza nisuthe abanolwazi e usizo nganoma isiphi isikhathi, kanye nezimo ukwandisa njengoba yakho Atlanta yokuhlanza amasevisi izidingo ukwandisa. Uthola ubunikazi zendawo isabele futhi ukuthi isithakazelo somuntu siqu extra. Complete amakhono lonakekela bekulungele kanye ACE, kanye zokulawula phezulu izinga notch.
Lapho uhlola izinhlobo ezahlukene Atlanta yokuhlanza services, cabanga inkampani like ACE, inkampani egcina indawo yakho hhayi ukufuna omkhulu intengo ilungelo, kodwa ukuthi kukwenza uzizwe ukahle futhi ubukeke okuhle ngokuthi isinqumo esifanele! Atlanta Cleaning Ochwepheshe inkampani esungulwe ngenhloso idumela ozinzile, futhi kungaba ukubhekana yonke indawo yakho noma ekhaya yokuhlanza izidingo.
House Cleaning Prices Per Hour Billings
House Cleaning Prices Per Hour Oregon
House Cleaning Prices Per Hour Dresser
House Cleaning Prices Per Hour Ringling
House Cleaning Prices Per Hour Sebree